Tag: njikọ nofollow | Martech Zone
Kpido: njikọ nofollow
Adịghị m nnukwu aka na Wikipedia. Agbanyeghị, n'oge gara aga enyero m ụfọdụ ego ntọala ma nyefee ọdịnaya na saịtị ha. M hụrụ Wikipedia n'anya… M na-eji ya oge niile na m na-ekwukarị ya mgbe ọ bụla na blọọgụ m. Wikipedia nyeere m aka - na - ewepụta ụfọdụ ebe maka saịtị m NA Wikipedia mere ka saịtị m gbasaa site na njikọ m laghachi. Nyere echiche a, ọ bụbeghị nke a